Allgedo.com » Dadaalka joojinta qaadka UK oo meelfiican maraysa.
Home » News » Dadaalka joojinta qaadka UK oo meelfiican maraysa. Print here| By: allgedo.com:
1 Jawaab Waxan halkan marka hore salaan uga soo jeedinaya dadka akhrisanaya qoraalkan. dhamaantiinba waxa ogaataan Sida kor ku xusanba anigoo ka mid ah Gudiga ee mutadawaca ah ee la dagaalanka iyo joojinta ee Maandooriyaha Qaadka. Waxan arrintan kaampaynkeeda wadnay waqti dheer, taasoo isugu jirtay wacyi gelin iyo saxeexyo farabadan oo laga arruriyay dadka ka soo horjeeda qaadka si dawladan loogu gudibiyo codkooda, isku dubarid shirar badan oo lagaga hadlaayo qaadka iyo dhibaatada uu u leeyahay dadkeena iyo dalkeenaba kuwaasoo aanu ku casuunay MP (member of parliament), counsellors iyo wixii la mid ahba.
Waxa kaloo isna jiray in Gudomiyaha Ururkan Mr. Abukar Awale uu runtii arrintan dawr weyn ka ciyaaray, isagoo olalahaa joojinta Qaatka geed dheer iyo geed gaabanba u korey sanada badana daba taagna, ha ahaato la kulanka madax dawlada ee UK, ama wacyi gelin toosa oo uu marwalba kala hadlo dadyawgeena halkan degan iyo kuwa kaleba sidii ay uga digtoonan lahaayeen sunta cagaaran. Waxa iyana Xusid mudan in uu Abokor wiigiiba mar toos uu uga sii daayo TVyada somalida barnaamuj ku saabsan joojinta qaadka. Waxa kaloo aan idin sheegaya in labadayaduba midkeena u shaqeyo Iskuul ka kalena shirkad, laakiin tan la dagaalankan Mandooriya Qaat aan u wadno uun nin dadkiisi u caawinaya mutadacnimo uun iyo dar iaahay.
Hadaba iyadoo taasi jirto ayaan anakuna dhinacayaga ka bilawnay dardar gelin arrintaasi iyada lagu xoojinaayo si ay hawshu dhinac walba uga dhamaato Waxanu marka ku guulasanay halkan inan helo MPga ugu dadaalka badan ee dhinaca joojinta Qaadka ee UK. Marka xidhiidha caadiya oo MP la qaatay mooyaane markii danbe waxanu ku qabanay Milton keynes shirweyn oo arrintaa lagaga hadlaayo, shirkaaso ay ka soo qaybgaleen dadka reer Milton keynes ee halkan degan badankooda, kaasoo aan ku casuunay Mr Laarcaster of ah MP Milton keynes kana tirsan xisbiga conservativka. Mr. Laancaster oo ah madaxa keliya ee isu taagay arrintan ka midha dhalinteeda isla markaana ah MP keliya ee arrintan u olaleya, oo si cad u gartay dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada somalida, ha noqoto burburka reeraha, caruurta, caafimaad darro, shaqo la’an, waxbarasho liidata, soo jiidasho dhalinyaradu inay muqadaraadka kalena isticmaalaan – gang cultureka waxa loo yaqaanba akhirka ka midnoqdaan. Waxaasoo dhibaato ah inuu qaadku u leeyahay dadka dhamaan ka yimi geeska afrika ku ayuu fahmay Mr. Laarcaster. Waxan ku soo qoray aniga iyo MPgu oo wada jir ah, ila 5 ama 6 maqaal kuwaasoo ku soo baxay labada Jariiradood ee lakala yidha MK News iyo Miltonkeynes Citizen newspaper. Inta kadib bishii Feberuary 14, waxanu ururkaygu qabanqaabiyay kaasoo u ka ahaa uu qaybxogleh ka qaatay Mr. Abuka Awale arrinta qabsoomida hawshii Mudaaharaadka balaadhna, kaasoo ka dhacay Aqalka Prime Minsterka Number 10 hortiisa kaasoo ah meesha looga taliyo UK. Maalinka aniga iyo dadkii arrinta qabanqaabinayayba iyo qolo kale oo volunteersba waxanu meesha ku diyaarinay boodhadh badan oo ay ku qornaayeen (Qaatka ha laga joojiya UK). Waxa isla goobti mudaaharaadka noogu yimi MPgayagii Milton keynes Mr. Laarcaster oo halka waraysiyo ku siiyay Telefitiono ay ka mid yihin BBC iyo qaarkale. Waxa kale uu dadkii mudaharadaayay u sheegay in uu la kulmay Wasiirka Daakhliga si uu arrinta wax uga qabto.
Hadaba aan soo gaabiyo hadalkayga maxaa noo qabsoomay waqtigan imika la joogo, kuwaasoo aan ku sheegi doono halkan hoose:
Inta kadib waxan u diray baadhitaan ay Jaamacad UK ka diyaarisay Qaatku dhibaatada uu ku hayo bushada ha noqoto caafimaadka, burburka reerka, budhcadnimada (ganga culture) iyadoo ay ku jiraan somali badan oo la waraysanyo oo sheegaya dhibaatada ay kala kulmeen Khatka. Sidoo kale waxan u diray maqaalo kala duwan oo ka soo baxay jaraaiidka UK oo wax ka qoray waxyeelada qaadka.
3- Mr. Laarcansan (Milton keynes MP), wuxu bishan gudaheeda la kulmay 7 qof oo MPyna ah oo ka soo jeeda xaafadaha somalidu ku badantahay iyo Chairmanka Conservative Party Mrs. Warsan oo asalkeedu ah Pakistan, iyo Charimanka Gudigayaga si arrinta looga hadlo. Wuxu Mr. Laarcastan ka codsaday inay gacan ka siiyaan iyaguna inay hawsha joojinta la dhamaystiraan. Shirka 6 ka mid ah MP way qaateen arrinta loo soo jeediyay halkan 1 uu ka diiday. Halka arrintu ka dhacaysay waxa goobjoog noo ahaa Mr. Abukar oo matalayay ururkaga.
4- Isla bishan dhexdeeda ama horaanta bisha August waxa kulmi doona 7 qof oo ah MPyada, Mr. Larcanster (Milton keynes MP), Conservative Chariman Party Mrs. Warsan iyo Gudiga u qaabilsan UK baadhitaan iyo qiimaynta daroogadada si ay arrinta uga wada hadlaan.
5- Waxa kaloo ii sheegtay Xooghayaha kale ee MP Ms Lydia ee Milton keynes mar aan kuwada hadalnay khadka telephonka wiigii hore in bisha September aan ka soo qaybgalo aniga iyo Abuka Awale kulan dheeraad ah oo ay gudiga qiimaynta Maandooriyaalka UK ay doonayan ay arrinta sua’aalo naga weydiiyan sido kalena fekerkayaga dhegaystaan.Gabagabo, ma doonayo inaan halkan ka sheego aafada uu Jaadku ku hayo dhulkeeni hooyo iyo meelaha kaleba, lacag malaayiin Dollar ah ayaa dawladahah jiiraanka ah inagaga baxda kuwaasoo horena dhul aan leenahayba hore inooga haystay, hadana ku darsaday dhaqaalehni waliba, waali iyo darxumana inoogu bedelay. Taasoo xita la odhankaro arrintani waxay sababtahay inay maandooriyaha xitaa reer miyiga barteen oo cunaan dabadeedna ay xaalufiyaan dhulkii iyagoo dhuxul ka shidaaya si ay qaad uga iibsadaan, taasina waa aafa cusub oo inagu soo korodhay. Waxay taasi waxyeelaysa roobkii oo dhulka ku yaraada, xoolihi oo meel ay daaqanba waaya, abaar iyo biyo laa’an soo noqnoqota iyo dhaqaalihi ka soo bixi jiray Xoolaha oo leeda. wuxu dhiiri geliya Qaatku sidoo kale mashaqaysta nimada bulshada, iyo musuqmaasaq si loogu iibsado lacagta la helo Qaatka isla markaana ka qaybqaata burburinta reeraha sidan hore u soo sheegayba iyo caafimaad xumadaba.
Ugu danbayn haddii arrintan imika la isu taagi waayo oo indhaha laga qarsanaayo mustaqbalka dalka iyo ummadaba meel dheerba laga dooni doona. Kolay qorshahaygu se itaalku meeshu doone ha nagaadhsiiye waxanu jeclahay hadaan ku guulaysano joojinta Qaatka ee UK, in aan dabadeedna aanu u jeesano siddii aanu wadankii wax uga qabanlahayn anakoo khibradayada ka faaiidaysanayna waayo sidan uu ku socda wax la eegan karo maaha. Ila haddana ma hayo qof iska soo sharxay dalkeeni oo arrinta ka hadlaaya, waxaad moodaaba inuu qaatkii dadkii ka adkaaday. Waxan gaba gabdii aad ugu mahadnaqaya raggii iyo dumarkii reer Milton keynes ee arrinta sida fiican ugaga qayb qaatay kuwaaso uu ka mid yahay Mudane Buraale Xalene, Abdulahi Yusuf, Mohamoud Adan, Mohamoud Adan iyo Ebtessam Adam.
Gudomiye ku Xigeenka la dagaalanka Maandooriyaha Qaatka
ee dalka Ingiriiska.
Dadaalka joojinta qaadka UK oo meelfiican maraysa. " gold account says:	July 16, 2012 at 10:59 pm	Labo Somali Ah Oo Lagu Toogtay Degmada Milton ee wadanka UK (Dhalinyaradan Ayaa Mid Ka Mid Ah Ku Qurbaxay Goobtii Lagu Toogtay Daawo SawiradaWaxaa xalay fiid kii lagu toogtay Magaalada Milton keynes laba wiil oo soomaali ah midna isla goobtii ayuu ku nafbaxay wiilkii kale waxaa lagu soo waramayaa in uu koomo ku jira oo ay xaaladiisu ay aad u liidato, wiilka dhintay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cabdiqaadir.Waxaa isla goobta soo buuxiyey soomaalida degan magaalada milton keynes oo ay ka muuqato argagax aad u weyn waxaana aan weli laga war hayn dilku sidii u dhacay maadaama labadii wiil midna dhintay midna uu koomo ku jiro aan laga warhayn sidii ay toogashadu u dhacday.Waqtiga wiilashada la tooganaayey ayaa ahayd 10:00 PM oo habeenimo booliiska magaalada ayaa waxay wadaan baaritaan si ay u ogaadaan cidii ka danbaysay toogashada dhalin yarada soomaaliyeed.wiilka dhintay ayaa aabihii waxa uu ku sugan yahay magaalada buuhoodle ee soomaaliya waxaana hada ku sugan goobta hooyadiis iyo adeeradiis.War hada nasoo gaaray ayaa sheegaya in uu wiilkii kale oo soomaliga ahaa uu isna uu dhintay dhaawicii soo gaaray. booliiska magaalada ayaa isla maanta salaadi jimce ka dib qaybinaayey waraaqo ku qoran Soomaali iyo english si ay u helaan macluumaad dheeriya oo ku saabsan dilka wiilasha dhalin yarada ah oo xalay lagu toogtay Magaalada Milton keynes waxaana wiilasha da,dooda lagu sheegay 19 sano jir.